Ihe kpatara ịzụ ahịa na otu IT kwesịrị ịkekọrịta ọrụ cybersecurity | Martech Zone
Ọrịa ọjọọ ahụ mere ka mkpa ngalaba ọ bụla dị n'ime ụlọ ọrụ tinyekwuo anya na nchekwa cyber. Nke ahụ nwere ezi uche, nri? Ka teknụzụ anyị na-eji na usoro anyị na ọrụ anyị kwa ụbọchị, ka anyị nwere ike ịdị mfe karị na mmebi. Mana nnabata nke omume nchekwa cyber ka mma kwesịrị ịmalite site na ndị otu azụmaahịa maara nke ọma.
Cybersecurity na-abụkarị nchegbu maka teknụzụ ozi (IT) ndị isi, ndị isi nchekwa nchekwa ozi (CISO) na Chief Technology Officers (CTO) ma ọ bụ onye isi mgbasa ozi (CIO). Mmụba na-agbawa agbawa nke mpụ cyber nwere - site na mkpa ọ dị - ebuli elu cybersecurity nke ọma karịa nke naanị ihe gbasara IT. N'ikpeazụ, Ndị isi C-suite na bọọdụ anaghị ahụ ihe egwu cyber dị ka nsogbu IT. ma dị ka ihe iyi egwu chọrọ ikwu okwu na ọkwa ọ bụla. Iji luso mmebi ahụ ọgụ nke ọma, cyberattack nwere ike ịtụnye ụlọ ọrụ chọrọ ka ụlọ ọrụ tinye cybersecurity n'ime atụmatụ njikwa ihe egwu ha niile.
Maka nchekwa zuru oke, ụlọ ọrụ ga-enwerịrị nguzozi n'etiti nchekwa, nzuzo na ahụmịhe ndị ahịa. Mana kedu ka otu dị iche iche ga-esi nweta nguzozi dị aghụghọ a? Site n'ịgba ndị otu ha na-ere ahịa ume ka ha na-arụsi ọrụ ike karị.
Kedu ihe kpatara ndị na-ere ahịa ji kwesị ịma gbasara Cybersecurity?
Aha ika gị dị naanị mma ka aha gị.
Ọ na-ewe afọ 20 iji wulite aha na nkeji ise iji mebie ya.
Warren nkuru n'onwe
Yabụ kedu ihe ga - eme mgbe ndị omempụ cyber nwetara ozi na ịnweta ha chọrọ iji mee ka ụlọ ọrụ nwee ike ime nke ọma, duhie ndị ahịa ya, izu ohi data, ma ọ bụ ka njọ? Nsogbu siri ike maka ụlọ ọrụ ahụ.
Chee echiche banyere ya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% nke azụmaahịa na-ezigara ndị ahịa ha ozi-e ahịa kwa ọnwa. Dollar ọ bụla a na-ere ahịa na-ahụ nloghachi na ntinye ego (ROI) nke ihe dịka $ 36. Mwakpo phishing na-emebi akara mmadụ na-eyi ọganiihu ọwa ahịa egwu.
N'ụzọ dị mwute, ọ na-adịkwa mfe maka ndị scrammers na ndị na-eme ihe ọjọọ ime ka hà bụ onye ọzọ. Technology na-egbochi spoofing a tozuru okè ma dị, ma nkuchi enweghị n'ihi na mgbe ụfọdụ ọ na-esiri otu IT ike igosipụta azụmahịa doro anya. ROI maka usoro nchekwa n'ofe nzukọ. Ka uru nke ụkpụrụ dị ka BIMI na DMRC na-apụtawanye ìhè, ịzụ ahịa na IT nwere ike ịde akụkọ nkwonkwo na-adọrọ adọrọ. Ọ bụ oge maka ụzọ zuru oke maka cybersecurity, nke na-akụda silos ma na-abawanye mmekorita n'etiti ngalaba.
Ọ maara DMRC dị oke mkpa iji chebe òtù dị iche iche pụọ na phishing na mmerụ aha mana ọ na-agbasi mbọ ike inweta azụta maka mmejuputa ya site n'aka onye ndu. Ihe ngosi akara maka njirimara ozi (BIMI) na-abịa, na-emepụta obi ụtọ na ngalaba ahịa, nke chọrọ ya n'ihi na ọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ na-emeghe. Ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ DMRC na BIMI na voil! IT na-enweta mmeri a na-ahụ anya na ire ahịa na-enweta mkpọtụ a na-ahụ anya na ROI. Onye ọ bụla na-emeri.
Ịrụkọ ọrụ ọnụ bụ igodo
Ọtụtụ ndị ọrụ na-elele IT ha, ahịa na ngalaba ndị ọzọ na silos. Ma ka cyberattacks na-aghọwanye ọkaibe na mgbagwoju anya, usoro echiche a adịghị abara onye ọ bụla uru. Ndị ahịa na-arụkwa ọrụ inye aka chekwa nzukọ na data ndị ahịa. N'ihi na ha nwere njikọ chiri anya na ọwa dịka mgbasa ozi ọha, mgbasa ozi na email, ndị na-ere ahịa na-eji ma kesaa nnukwu ozi.
Ndị omempụ cyber na-ebuso mwakpo mmekọrịta ọha na eze na-eji nke a eme ihe maka uru ha. Ha na-eji email izipu arịrịọ adịgboroja ma ọ bụ arịrịọ. Mgbe emepere ya, ozi-e ndị a na-ebute malware na kọmputa ndị ahịa. Ọtụtụ ndị otu na-ere ahịa na-arụkọkwa ọrụ na ndị na-ere ahịa na mpụga dị iche iche na nyiwe chọrọ ịnweta ma ọ bụ mgbanwe nke ozi azụmaahịa nzuzo.
Na mgbe a na-atụ anya na ndị otu ahịa ga-egosi uto ROI ka ha na-emekwu ihe na obere obere, ha na-achọ mgbe niile maka teknụzụ ọhụrụ, nke na-emepe emepe nke na-abawanye mmepụta na arụmọrụ. Mana ọganihu ndị a nwere ike ịmepụta oghere na-atụghị anya ya maka mwakpo cyber. Ọ bụ ya mere ndị na-ere ahịa na ndị ọkachamara IT ga-esi pụọ na silos ha iji kwado ma hụ na nkwalite ahịa adịghị ahapụ ụlọ ọrụ ahụ n'ihe egwu nchekwa. Ndị CMO na CISO kwesịrị inyocha ihe ngwọta tupu mmejuputa ha na ndị ọrụ ịzụ ahịa ụgbọ oloko ka ha mata na ịkọ akụkọ ihe egwu cybersecurity nwere ike ime.
Ndị ọkachamara IT kwesịrị inye ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa ikike ka ha bụrụ ndị nlekọta nke ọrụ nchekwa ozi kacha mma site na iji:
Nyocha ọtụtụ ihe (MFA)
Ndị njikwa okwuntughe dị ka Dashlane or LassPass.
Otu nbanye (SSO)
Ngwá ọrụ ọzọ bara uru ịgụnye na atụmatụ cybersecurity nke ndị ahịa? DMARC.
Uru DMARC Maka Ndị otu Azụmaahịa
Nyochaa ozi dabere na ngalaba, mkpesa na nkwenye bụ ọkọlọtọ ọla edo maka ị nweta ozi-e. Ụlọ ọrụ na-anabata DMRC na mmanye na-ekwe nkwa na ọ bụ naanị ụlọ ọrụ akwadoro nwere ike izipu ozi-e n'aha ha.
Site n'iji DMARC (na usoro ndị dị n'okpuru SPF na DKIM) n'ụzọ dị irè na ịbanye na Enforcement, ụdị ndị na-ahụ maka nnyefe email dị mma .. Na-enweghị nkwenye, ụlọ ọrụ na-ahapụ onwe ha maka ndị omempụ cyber na-eji ngalaba ha iji zipu phishing na spam email. DMRC na Enforcement na-egbochi ndị ọchụnta ego ị nweta njem n'efu na ngalaba echedoro.
Enweghị SPF ma ọ bụ DKIM kwadoro onye zitere ya megide ubi "Si:" nke ndị ọrụ na-ahụ. Amụma akọwapụtara na ndekọ DMRC nwere ike hụ na enwere “nhazi” (ya bụ egwuregwu) n'etiti ihe a na-ahụ anya Site: adreesị yana ngalaba igodo DKIM ma ọ bụ onye na-ezigara SPF. Atụmatụ a na-egbochi ndị omekome cyber ka ha jiri ngalaba ụgha dị na ya si: ubi nke na-aghọgbu ndị nnata ma na-ahapụ ndị na-egwu hacker ka ha na-emegharị ndị ọrụ na-amaghị ihe na ngalaba na-enweghị njikọ n'okpuru njikwa ha.
Otu ndị na-ere ahịa na-eziga ozi-e ọ bụghị naanị ka ha lekwasịrị anya ndị ahịa nwere ike. N'ikpeazụ, ha chọrọ ka emepee ozi-e ndị ahụ ma mee ya. Nyocha DMRC na-agba mbọ hụ na ozi-e ndị ahụ rutere na igbe mbata ebu n'obi. Ụdị nwere ike ịkwalite nkwụghachi ha ọbụna n'ihu site n'ịgbakwunye Brand Indicators for Message Identification (BIMI).
BIMI na-atụgharị DMRC ka ọ bụrụ ahịa ahịa ROI
BIMI bụ ngwá ọrụ onye ọ bụla na-ere ahịa kwesịrị iji. BIMI na-ahapụ ndị na-ere ahịa tinye akara akara ha na ozi-e echedoro, nke egosiri na-abawanye ọnụego mepere emepe site na 10% na nkezi.
Na nkenke, BIMI bụ uru ika maka ndị na-ere ahịa. Ewubere ya na teknụzụ nyocha email siri ike - DMRC na mmanye - yana mmekorita n'etiti ndị ọrụ dị iche iche gụnyere ahịa, IT na ngalaba iwu.
Ndị na-ere ahịa na-adaberekarị n'ahịrị isiokwu dị nkọ, na-adọrọ adọrọ iji dọta uche ndị nnata, mana site na BIMI, ozi ịntanetị na-eji akara ngosi na-adị ngwa ngwa ma dị mfe ịchọpụta. Ọbụlagodi na ndị ahịa anaghị emeghe email ahụ, ha na-ahụ akara ngosi. Dị ka itinye logo na t-shirt, ụlọ, ma ọ bụ swag ndị ọzọ, akara ngosi na email na-akpọ nlebara anya nke ndị nnata ozugbo na ika ahụ - mmepe agaghị ekwe omume na mbụ na-ebughị ụzọ mepee ozi ahụ. BIMI na-enyere ndị ahịa aka ịbanye na igbe mbata ngwa ngwa.
DMRC nke Valimail dị ka ọrụ
DMARC mmanye is ụzọ na BIMI. Iji jee ije n'ụzọ a chọrọ ịhụ na DNS gosipụtara nke ọma ozi ozi niile ezitere - ọrụ na-ewe oge maka azụmaahịa. Naanị 15% nke ụlọ ọrụ mezuru ọrụ DMRC ha nke ọma. A ga-enwerịrị ụzọ ka mma, nri? Enwere!
Valimail Authenticate na-enye DMRC ka ọrụ, gụnyere:
Nhazi DNS akpaaka
Nchọpụta onye izipu nwere ọgụgụ isi
Ndepụta ọrụ dị mfe ịgbaso nke na-enyere ndị ọrụ aka iru ngwa ngwa, mmanye DMRC na-aga n'ihu
Nyocha DMARC™ na-ewepụ ihe ize ndụ site na inye DNS. Ọhụụ ya zuru oke na-enye ohere ka ụlọ ọrụ hụ onye na-eziga email na nnọchite ha. eduzi, na-arụ ọrụ na-akpaghị aka na-ejegharị ndị ọrụ site na ọrụ ọ bụla iji hazie ọrụ na-enweghị mkpa miri emi, nkà na ụzụ ọmụma ma ọ bụ maka nkwekọrịta na-abụghị ọkachamara. N'ikpeazụ, nyocha gburugburu na-enyere aka ịkwado ndụmọdụ akpaghị aka - yana ọkwa na-eme ka ndị ọrụ dị ọhụrụ.
Ngalaba ịre ahịa enweghị ike ibi na silos, gbanarị pụọ na nchegbu cybersecurity, ọzọ. N'ihi na a na-enweta ha karịa site na ọnụnọ buru ibu na Twitter, LinkedIn na nyiwe mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ, ndị na-agba ọsọ na-ahụ ha dị ka ihe dị mfe, ndị na-erigbu. Dịka ndị otu na-amata uru nke ịmepụta omenala nke mmata cybersecurity, ha ga-akpọrịrị ndị otu ha na-ere ahịa ka ha na ndị otu IT na CISO jikọọ aka na tebụl nchịkwa ihe ize ndụ.
ngosi: Martech Zone etinyela njikọ ndị mmekọ na edemede a.
Tags: BIMIika hijackingosisictomwakpo cyberatcybercrimecybersecurityDMARCNyocha emailemail Marketingaha emailnjikwa aha njirimara emailnyocha ọtụtụ ihephishingahaspoofing
Kedu otu mkpebi ụlọ ọrụ na-agbakwunye uru na usoro ịre ahịa gị